ဒေါင်လိုက်လယ်သမားအစေ့အမျိုးအနွယ်ကိုရောနှောရောင်း,အခွံမာသီး / အစေ့များအတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးအနွယ်ကိုရောနှောနေခြင်း
ဒေါင်လိုက်လယ်သမားစပါးမျိုးစေ့များရောနှောစက်ကိုအသုံးပြုသည် ရုပ်ရှင်အင်္ကျီရန် စပါးကိုမျိုးစေ့အဘို့,မြေပဲစေ့,ဝါဂွမ်းမျိုးစေ့,ဂျုံစေ့,ပန်းပွင့်အမျိုးအနွယ်, လယ်ကွင်းအစေ့,ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမျိုးအနွယ်ကို,နှင့်မျိုးစေ့အရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်အခြား granular အပေါ်ယံပိုင်းဖြစ်စဉ်ကို,တိကျစွာစိုက်ပျိုးရန်လွယ်ကူသည်, အစေ့များချွေတာခြင်း, ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အမျိုးစေ့, ပိုးမွှားနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်မျိုးစေ့၏အသွင်အပြင်တိုးတက်စေရန်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်။,ပိုးသတ်ဆေး,micro အာဟာရဓာတ်မြေသြဇာ,အပင်ကြီးထွားမှုထိန်းညှိ,အစွန်းအထင်းများအစွန်းအထင်းများသို့မဟုတ်အစွန်းအထင်းများဖြည့်တင်းသည်,
ထိပ်တန်းအရည်အသွေး အမျိုးအနွယ်ကိုစက်အပေါ်ယံပိုင်း လယ်ယာစက်ယန္တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်, ဒေါင်လိုက်စပါးမျိုးစေ့များရောနှောစက်ကိုများသောအားဖြင့်သီးနှံမျိုးစေ့ကို fungicide နှင့်ရောစပ်ရန်အသုံးပြုသည်,ပိုးသတ်ဆေး,micro အာဟာရဓာတ်မြေသြဇာ,အပင်ကြီးထွားမှုထိန်းညှိ,အစွန်းအထင်းသို့မဟုတ်ဖြည့်အေးဂျင့် tan အမျိုးအနွယ်ကိုအပြင်ဘက်အမျိုးအနွယ်၌ materials.Wrapped,သို့အစေ့ကိုရရှိရန်အတွက်
အလင်းဆုံ orbasickeep မူရင်းပုံသဏ္.ာန်, ခုခံတိုးတက်စေ, ရောဂါခုခံ,အပင်ပေါက်ရန်အတွက်အရှိန်မြှင့်, ပျိုးပင်သို့မြှင့်တင်ရန်,
ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်,မျိုးစေ့နည်းပညာ၏အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေရန်. အလျင်အမြန်ရုပ်ရှင်ခိုင်မာအောင်နိုင်ညွှန်ပြ, နှင့်လဲကျရန်မလွယ်ကူပါ.
အမျိုးအနွယ်ကိုပေါင်းစပ်စက်ကိုပုံမှန်သံမဏိသို့မဟုတ်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်သည်. ၎င်းသည်များစွာသောဘောဇဉ်များကဲ့သို့သောအသုံးချမှုများအတွက်သင့်တော်သည်, တိရိစ္ဆာန်အစာကျွေး, ခြောက်သွေ့သောအမှုန့်နှင့်အစေ့. ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များအရမျိုးစေ့အရောနှောစက်စက်စွမ်းရည်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ သင်ရွေးချယ်နိုင်သောဒေါင်လိုက်အမျိုးအစားသို့မဟုတ်အလျားလိုက်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ မျိုးစေ့စက်ရောနှောစက်၏စွမ်းအားသည်လျှပ်စစ်မော်တာဖြစ်နိုင်သည်,ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်,ဒီဇယ်အင်ဂျင်စသည်.
1. ရောင်းရန်အတွက်လယ်ယာစိုက်ပျိုးသောမျိုးစေ့များရောနှောခြင်းကိုအဓိကအားဖြင့်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်သည်, ချေးခုခံ.
4. အမျိုးအနွယ်ကိုရောနှောစည်မျှကျန်ကြွင်းသည်, လွယ်ကူသောသန့်ရှင်းရေးစက်.
မော်ဒယ် VTZC500 VTZC1000 VTZC2000
ပါဝါ (kw) 1.5 2.2 3
ကွဲနှုန်း ≤ 0.1% ≤ 0.1% ≤ 0.1%